Ngokuqinisekile wonke umuntu ofuna ukuthenga isikhwama noma isikhwama ngezandla, abanesifiso sokwazi kanjani ezivuzayo eqinile futhi ethembekile ku umkhiqizo ekhethiwe. Musa likhiphe ngokuhamba kwesikhathi noma idlulele, ngaleyo ndlela kwakhiwe bokulahlekelwa imali okwamanje kubalulekile, noma imibhalo? Ngakho-ke, samuntu kangcono agqoke imikhiqizo eyenziwe ngezandla ngeke ngqo wabophela uthunge.
Leli lunga lethiwa ngenxa yokuthi base abamhlaba e zekadeni ihhashi Saddles futhi amahanisi, ngoba lapho, ngokuhlanganyela eqinile okunokwethenjelwa - lena umbuzo obaluleke kakhulu, ngoba kuwo futhi ingase ixhomeke endleleni ukuphila komuntu. He kubhekwa cishe enamandla kakhulu, esetshenziselwa lesikhumba uthunge. Semi-umphetho esikhumbeni has kwanginika amandla amakhulu uma ziqhathaniswa umshini, kusukela izinaliti ezimbili ezibekwe ngesandla phezu izimbobo pre-ngesibhakela. Isebenza ngendlela elandelayo: inaliti ziboniswa ngakolunye uhlangothi kwesikhumba futhi Stitch ngamunye aphambana nomunye, ngaleyo ndlela kwakhele isixha okuqinile. Lapho usebenzisa i-umthungo ezinjalo, uma one Stitch amakhefu, it is cishe kungaqashelwa, njengoba isekela ngentambo ngaphesheya kwesikhumba. Ngakho-ke izimbobo kuwo wena umane ngeke ubone. Lokho kukhona ubuhle kanye ubunjalo lokhu ngokuhlanganyela - amandla nokwethembeka isikhathi eside. Labo izinto Ithungelwe idivayisi idatha, liyokuma isikhathi eside kunaleso Ithungelwe izinto lokuthunga machine.
Ngokulandelayo, sicabanga umbuzo lokho sehhashi lesifanele awahlanganise futhi indlela yokukwenza ngesibonelo ukufakwa umbani esikhwameni sakhe. Zimbili uthunge - lula futhi kunzima, futhi zombili zidinga ezinye umkhuba, ukunakekelwa nokubekezela. Uma sikhuluma ngendlela libe nzima ngokwengeziwe, kudingeka sikhumbule ukuthi uphawu out izimbobo isondo metal kuphela akhethekile ngezibhakela usungulo kakade ngaphansi Stitch entsha. Udinga isikhathi sokuprakthiza, ukwenza lokhu rovnenko umthungo, amahle futhi iqine. Yini okudingeka siyenze ekuqaleni komsebenzi wethu:
Ukuze ngezibhakela umgodi, kungcono ukusebenzisa iyashaya metal.
Vkoly ngezibhakela wax ngesikhatsi kokuhlinzwa, ukuze kahle faka futhi uphume isikhumba.
Vele ngezibhakela uchungechunge izimbobo endaweni lapho kuhlelwe ukuba enze umugqa ukusebenza.
Ukuze ulungise uziphu futhi abushelelezi imigqa kuyadingeka kusengaphambili ukunamathisela yona isigxingi ingcina. Futhi ungakwazi ukuthatha tape kabili emaceleni, kodwa embi ngalo wukuthi ke uyokhetha inaliti.
Ulungiselela crosslinking sehhashi Stitch
Udinga ithuluzi zazibulala noma plug ngoba ukugoba okuyizinto ezimbalwa namazinyo etshekile. Lokhu kwenza weld bushelelezi futhi emuhle. Amathuluzi ngamazinyo ngqo Kuyinto evamile ukusebenzisa i-ukwaluka, lacing, kodwa hhayi ngoba crosslinking. Ngakho-ke kufanele kuqala hlola ukuthi ithuluzi onayo. Eza ngobukhulu ezahlukene kuye ngokuthi bangaki yaseZimbabwe sentimutha ngamunye ofuna ukuyenza. Isinyathelo sokuqala ukuba ukhethe i-plug ngamazinyo ububanzi, ngaphandle kwalokho ngeke ukuchitha isikhathi esiningi phezu uthunge.
Izinyathelo for firmware imanuwali
Nezibazi, hatching - inqubo extrusion imigqa ezizosiza imbobo lokwephula ukuze uthunge. Ungakwazi iphendukele ikhampasi, uma azikho ithuluzi elifanele.
Ukwenza izimbobo - bavame ukwenza indlela yabo ebusweni isikhumba usebenzisa ngesando zenjoloba noma amadivayisi kwabathinta. Inhloso yayo - ukuhlonza izindawo lapho izimbobo kuyoba, kodwa akuwenzi fike bhaklu.
egoba Obrabatyvanii, uma ikhona. Uma udinga ukwenza izimbobo kanye endaweni ijika, sebenzisa roller kwabathinta. Lena isiqinisekiso sokuthi zonke izimbobo at elifanayo nasemsebenzini yokugcina kuzokwenziwa kahle.
Edalula ukuvulwa. Ukuze le nqubo, kufanele usebenzise usungulo (cruciform nge ithiphu idayimane). Bamba isibambo ngosungulo esimweni mpo, ucindezele phansi emgodini ke.
Nenkanuko edlulele. Ugandaganda umphetho (isib uthunge amahanisi Stitch) idinga kokubili izandla senzo. Lokhu kuzokusiza isiqeshana-lock, lapho ungakwazi ukufaka umkhiqizo wakho. isiqeshana Standard for ezifana cross-ukuxhumanisa - kungcono okhunini ngesimo esebenzisa ezinkulu.
ngentambo zendwa- (enamafutha nelineni intambo). Njengomthetho, iloli umphetho kwenza kube izindikimba ezinjalo. Ngaphambi kokusebenzisa kubo ziphathwa ngemakhilayoni, ngakho musa smear futhi kalula lwangena ngokusebenzisa lesikhumba.
Ukuchusha ukuchusha inaliti. Ukuze wenze izinto ezinkulu ngesandla, kumelwe ukhethe inaliti nge ekupheleni blunt.
Ukubeka ngentambo. Kuyadingeka uyephuza ekupheleni wentambo ukuyihlanganisa ku-loop.
Yini esiyidingayo ukuze thunga?
Manje sidinga izinaliti ngoba ukuthunga, okuyinto kumele sibe nomfutho amathiphu ahlabayo bephumelela ngokukhululekile emgodini futhi akazange abambelele. Ukuze injongo yethu, sizodinga izinaliti ezimbili. Bese uya ngqo isikhumba, kungcono ukuba-ke waba. №10 Standard asifanele izinjongo ezifana ngobugebengu ngokushesha.
Ukuze wenze uphawu eqinile futhi enokwethenjelwa, sidinga, intambo enhle namandla, kungcono ukusebenzisa nelineni (waba). Lapho ziyatholakala, kuzosenza bezicathulo. Manje sekuyisikhathi ukwakha Stitch sehhashi. Indlela yokukwenza ngokuvumelana nemithetho futhi ukuthi siye saba okuhle futhi enokwethenjelwa, sizobheka ngezansi.
Okuyisisekelo ngokuvumelana nemithetho elandelayo:
Ithiphu Vdevaem wentambo ngokusebenzisa imbobo yenaliti, bese ujova ke at ibanga cishe 6 cm kusuka tip yayo.
Ngokulandelayo, welule inaliti kumjikelezo.
Bese uyaziveza lonke ngentambo ukubamba esifushane ichopho, bese qinisa ngokuqinile.
Senza ngokufanayo nezinye inaliti ekupheleni lesibili. Ngenxa yalokho, sithola intambo isikhathi eside izinaliti both qeda.
Kungcono ukuthi ubude ntambo kwaba isikhathi eside izikhathi eziningana kuka ingxenye ukuthi Ithungelwe (khumbula umthetho osemqoka: "Lo mkhulu isikhumba - kulapho intambo").
Siqala inqubo lokuthunga
Into yokuqala okudingeka sikukhumbule ukuthi wabophela awahlanganise umthungo okungukuthi into yakho kwaba okunokwethenjelwa uqine futhi ihlala isikhathi eside kakhulu. Ake step by step imithetho cross-ukuxhumanisa:
Threaded ngokusebenzisa inaliti emgodini kuqala, bese kudingeka ukuvumelanisa string, ubude uyefana.
Uma threaded inaliti kwesokunxele okungukuthi asesandleni sakhe sokhohlo, enye imbobo.
Khona-ke Yenza zokukhwabanisa efanayo yenaliti ngakwesokudla (umuntu ngakwesokunene) ku emgodini efanayo. Kungcono ukuba xhoxha intambo.
Khona-ke udinga qinisa intambo - ukudonsa emaphethelweni ezimbili uze unganyakazi.
Threaded inaliti kwesokunxele in emgodini lwesithathu.
Ukudonsa bese nilahlekelwa inaliti kwesokudla in emgodini efanayo futhi athathe ngakolunye uhlangothi
Qinisa kumele kube Friend kakhulu, nge emikhawulweni emibili.
Ngakho thunga kuze kube sekupheleni. Kumele kukhunjulwe, futhi ukwazi ukuthi ukuqedela umphetho iloli ukuze azithengiswa aphume ngokushesha okukhulu. Asazi isidingo sokwenza olunye ISIZINDA njengoba ezivuzayo double kunamandla kakhulu bebodwa. Kuphela ezanele ukwenza ezintathu Stitch "inaliti emuva" emgodini wokugcina. Khona-ke kudingeka usike intambo.
Uma umphetho senziwa yibo bonke imithetho, kusho ukuthi ayinaso chaza futhi izothatha isikhathi eside. Ngakho-ke, ekugcineni kufanele njalo uvalwe some. Ngaphansi lomsebenzi ukuthi maduze, iminwe yakho ngeke Ache, nentambo - isikhumba. Ngokuhamba kwesikhathi, konke kuyoba hamba, ukujwayela, kodwa okwamanje kutuswa mpahla umunwe kancane olukhonkiwe lapho intambo enquma isikhumba. Kungcono Yiqiniso ngokushesha ukukhumbula indlela thunga sehhashi umphetho kahle futhi ufunde indlela yokukwenza masinya.
Ukuze umsebenzi besiyikhwalithi
Idinga lokhu okulandelayo: ku inaliti kwesokunxele sidlula imbobo bese ewela inaliti ngakwesokunene nge esiphambanweni. Gcina inaliti isidingo index ngomunwe kanye sesandla sakhe sokunene, yabe isiwela isandla sakho kwesokunxele. Okokuqala kuyoba kancane ungakhululekile, futhi mhlawumbe ungakhululekile, kodwa ngokushesha ukujwayela nesibambo, yaseZimbabwe yakho kuyoba flat. Ngemva kokuphothulwa ngokuhlanganyela kufanele khenqeza lesikhumba noma irabha ngesando yaseZimbabwe wangena kahle. Manje joint izothatha iminyaka bese ungaba uyaziqhenya ukuthi yini eyenza ukuthi eyabo.
Ngakho, sathola ukuthi Stitch sehhashi unamandla kakhulu, futhi ubuqotho mkhiqizo ahlupheke, ngisho noma umuntu ephula yezinhlamvu kuphi. Lokhu umphetho kwesokudla, okuyinto ngokuvamile esetshenziselwa zokuhlobisa. Limelela hhayi kuphela isitayela nobuhle, kodwa futhi lesi isiqinisekiso eliphezulu kanye nokwethembeka.
Senza ngokwakho Namacici Chic eyenziwe polymer nobumba. Wabasaqalayo.